Masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika arikushora zvikuru kushungurudzwa kuri kuitwa mumirira weHarare West muNational Assembly, Muzvare Joana Mamombe, achiti zviri kutika kuna Muzvare Mamombe zvichaita kuti madzimai akawanda asade kupinda mune zvematongerwo enyika.
Mutevedzeri wasachigaro wesangano rinomirira madzimai ari muparamende, reParliamentary Women Caucus, Amai Sibusisiwe Bhuda Masara, vaudza Studio 7 kuti madzimai ese munyika haasi kufara nezviri kuitika pana Muzvare Mamombe.
Amai Masara vati zvingave zvakakana kuti Muzvare Mamombe vaongororwe nachiremba wavo kana kuti muzvipatara zvisiri mujeri.
Vati hazvishamisi kuti Muzvare Mamombe vanogona kunge ave kurwara nepfungwa nekuti kutambudzwa kwavari kuitwa kwanyanya.
Vati nyaya yekuenzanisa mikana pakati pevanhurume nemadzimai haigoni kubudirira nekuti kushungurudzwa kuri kuitwa Muzvare Mamombe kuchaita kuti madzimai akawanda asapinde munyaya dzezvematongerwo enyika.
Mutungamiriri wesangano rinokurudzira madzimai kupinda munyaya dzematongorwe enyika reWomen’s Academy for Leadership and Political Education, Muzvare Sithabile Dewa, vaudza Studio7 kuti zviri kuitika kuna Muzvare Mamombe zvinogona kuitika kumudzimai wese anoda kuita zvematongerwo enyika.
Vati vave kuda kuti masangano ekunze akaita sana African Union neUnited Nations atume nhumwa dzawo kuzoongorora kuti chii chaicho chiri kuitika panyaya yaMuzvare Mamombe nevamwe vake Muzvare Cecilia Chimbiri naMuzvare Netsai Marowa.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum, Muzvare Jestina Mukoko, vati vakarwadziwa zvikuru nemutongo wedare wekuti Muzvare Mamombe vakandwe mujere kuitira kuti vaongororwe pfungwa dzavo nenyanzvi. Vati mutongo uyu haunei nemutemo asi kuda kurwadzisa Muzvare Mamombe.
Muzvare Mukoko, avo vakambopambwa vakatochwa muna Zvita 2008, vati chakakosha kuti vana veZimbabwe varambe vachitaura kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika vachiti kana izvi zvikatambirwa matambudziko anogona kugadzirwa.
Rimwe gweta remuHarare, Muzvare Rumbidzai Venge, vati Muzvare Mamombe munhu aimirira bato rake nekushandira nyika yake uye zvave kuitika kwaari zvinovhundutsa vechidiki.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu kuchamhembe kweAfrica, reSouthern African Human Rights Defenders Network, raratidzawo kushushikana nezviri kuitika muZimbabwe richiti matare haachaita zvemutemo, asi kuti ave kuita zvekushungurudza vanorwira kodzero dzevanhu.
Asi zvinisei nezviri kuitika kuna Muzvare Mamombe nevamwe vakawanda munyika, mutungamiriri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, nezuro vakaudza musangano weUnited Nations General Assembly, UNGA, kuti Zimbabwe yakazvipira kuremekedza kodzero dzevanhu pamwe nekuti munyika muve nehutongi hwejekerere.
Muzinda weAmerica muZimbabwe waziviza pandemutande rawo reTwitter kuti wakamirira kuona kuti izvi zvichatwa here nehurumende yaVaMnangagwa.
Watiwo kurega Muzvare Mamombe vachirapwa kuchipatara chavanoda pamwe nekusiya mhosva dzavari kupomerwa pamwe nekurega kuvashungurudza ndezvimwe zvinhu zvingave mucherechedzo wezvakataurwa naVaMnangagwa kuUNGA.